Iye zvino yave kuwanikwa Plasma 5.9.1, yekutanga yekuchengetedza vhezheni yePlasma 5.9 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yazvino vhezheni yeKDE Plasma yakaburitswa vhiki rapfuura. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve Plasma 5.9. Iyi vhezheni nyowani yaisanganisira maficha nyowani nerutsigiro rukuru rweWayland graphical server. Uye kunyangwe migove mizhinji isina iyi vhezheni yePlasma parizvino, timu yekuvandudza yeKDE yakatoburitsa vhezheni yekuchengetedza.
Plasma 5.9.1 ndiyo nyowani vhezheni yedesktop ino inogadzirisa akawanda mabugs izvo zvakawanikwa pane desktop uye izvo zvichanyatso kuvandudza mashandiro ePlasma pamakomputa edu.
Huwandu hwetsikidzi hwakagadziriswa idiki, kune kutaura kwe60 bugs yakagadziriswa, asi iwo mabhugi anokanganisa zvirongwa zvakakosha sePlasma Networkmanager, Oxygen, Discover, kana Plasma Wedzera-mairi, pakati pevamwe.
Plasma 5.9.1 ndiyo yekutanga kugadzirisa kuburitswa kweakakurumbira KDE Plasma desktop
Plasma 5.9.1 yave kuwanikwa kurodha pasi uye kuiswa kwayo kunokurudzirwa pachinzvimbo chePlasma 5.9. Nekudaro, kunze kwekuburitsa kwekuburitsa kupihwa kwekuburitsa, iyi vhezheni haizosvika kune akawanda Gnu / Linux migove Icho chikonzero hachisi icho mhando yeshanduro asi chokwadi chekuti mukati memazuva manomwe tichaziva Plasma 7, vhezheni itsva iyo ichavandudza iyo yazvino uye saka inonyanya kukodzera kushandiswa mune zvekugadzira zvigadzirwa.
PaFebruary 28th, Plasma 5.9.3 ichasunungurwa uye ingangoita mwedzi gare gare, Plasma 5.9.4 ichasvika. Kuburitswa kwechishanu kwekuchengetedza kuchasvika musi waApril 25, kuburitswa kunozove kwekupedzisira kuburitswa kwekuchengetedza kusati kwaburitswa Plasma 5.10 vhezheni, iyo ichaitika muna Chivabvu 2017.
Plasma 5.9.4 ingangoita iyo vhezheni inosvika kune vazhinji vashandisi nekuda kwenzvimbo dzepamutemo dzekusa-kupukunyuka kwekuburitswa kwekuburitsa, kunyange hazvo zvese zvichizendamira pasarudzo yemunhu yega yeyekuvandudza timu. Chero zvazvingaitika, zvinokurudzirwa gara uchisarudza yazvino vhezheni sezvo iri irinyore uye yakachengeteka vhezheni yezvikwata zvekugadzira, saka tinokurudzira kuvandudza kana iwe uchitova nePlasma 5.9.1 mukugovera kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Iye zvino inowanikwa Plasma 5.9.1, yekutanga yekuchengetedza vhezheni yePlasma 5.9
OpenSUSE Tumbleweed yakagadziridzwa